7 Zviratidzo Iwe Haudi Iyo Ad Ad Server | Martech Zone
Mazhinji evashambadziri vehunyanzvi vanoedza kukugonesa iwe kuti unoda ad server, kunyanya kana iwe uri wepamusoro-vhoriyamu kushambadzira network nekuti ndizvo zvavari kuedza kutengesa. Icho chidimbu chine simba che software uye chinogona kuendesa kuyerwa kuyerwa kune mamwe maratidziro eneti uye vamwe vatambi vetekinoroji, asi ad server haina mhinduro kwayo kune wese munhu mune ese mamiriro ezvinhu.
Mumakore edu gumi + ebasa muindasitiri, isu takafungisisa mabhizinesi mazhinji kuwana dhivhosi server kunyangwe pavakange vasingade imwe. Uye zvakanyanya, zvinowanzo kuve zvikonzero zvakafanana. Nekudaro, ini nechikwata changu tadzikisa runyorwa pasi kusvika kune anomwe zviratidzo nei uchifanira kufunga imwe sarudzo kune yekushambadzira server mhinduro.
Iwe hauna chero chinongedzo chekutenga kana kutengesa traffic
Seva yekushambadzira inokupa iyo tech iwe yaunoda kuti ugadzire macampaign uye uenzanise vaparidzi nevashambadzi vane banner-kune-yekuisa mamiriro iwe yawakaisa nemaoko. Izvo hazvikupe iwe vaparidzi nevashambadzi ivo pachavo. Kana iwe usati watowana mukana wakaringana wekugovera uye wekuda vadyidzani, hazvina musoro kuti iwe ubhadhare software mhinduro iyo inokubatsira iwe kubata izvo zvinongedzo.
Panzvimbo iyoyo, iwe unofanirwa kutsvaga-yekuzvishandira yega midhiya yekutenga chikuva iyo inopa pre-set vadyidzani vekutengesa traffic kana kushanda neayo ad network kuti ugadzirise yako midhiya kutenga zvido. Iyo yekushambadzira network iwe yaunofambidzana nayo ine inodiwa kubatana kuti utengese yakakwira vhoriyamu, saka ndivo chete ivo vanozobatsirika kubva kushambadziro server maficha ayo anovagonesa ivo kuitisa nyore kubata kwavo kupihwa uye kudiwa mumba.
Iwe uri kutsvaga yakazara-sevhisi mhinduro
Kana iwe uchitsvaga mhinduro inokutendera iwe kurega kushandisa nguva uye zviwanikwa pane zvemanyore kushambadzira kushambadzira, iwe unenge uri nani kubvunza kune yekushambadzira agency. Kana iwe ukasarudza kushandisa ad server, iwe unowana rubatsiro neiyo software mune yekukwira nhanho uye iwe uchafadzwa yakanyanya kugadzirika uye inogoneka kushambadzira kushambadzira ruzivo kupfuura iwe yaungave iwe waive nayo neiyo yakasanganiswa kana yekunze mhinduro, asi iwe unenge usiri kuzove unokwanisa kushambidza maoko ako echishambadziro kushandira zvizere.
Izvo zvichaitirwa neserver server kukwidziridza kudzoka kwako pakushandisa kushambadza (ROAS?
Iwe hauna kugadzirira kuzara mu-dzimba
Yechena-chitaridzi kushambadzira server zvinoreva kuti iwe unowana muridzi wakazara wepuratifomu, zvichikubvumidza iwe kunyatso gadzirisa yako mishandirapamwe uye kurega kubhadhara iyo yepakati fizi. Izvo zvakanaka kune avo vakagadzirira kuunza yavo yekushambadzira-mhinduro mukati-mumba, asi kune vamwe, kugadzirisa uye mutengo-kugona kunogona kunge kusiri kwekutanga.
Kana iwe parizvino uri kushandisa yekuzvishandira DSP kana imwe chikuva chekushambadzira uye iwe uri kufara nemhinduro yako yakasanganiswa, ungangodaro usina kugadzirira kuunza kushambadzira kwako kushandira mumba. Kuburitsa kunze kweimwe yemutoro kune wechitatu mukana kunogona kupa mabhenefiti epfupi-kwenguva kune avo vasingabatane nevhoriyamu yakakwira. Nekudaro, maratidziro akagadzirirwa kubata zana remazana emushandirapamwe wavo nekubatana zvinobatsira zvakanyanya kubva mukugadzirisa yavo pachavo inogadziriswa chikuva.
Iwe unoshandira isingasviki miriyoni imwe yekuratidzira pamwedzi
Ad server server mitengo yemitengo inowanzoenderana nenhamba yezviratidzo zvaunoshumira mwedzi wega wega. Ivo vanoshandira isingasviki mamirioni gumi ekuratidzira vanogona kuwana ekutanga mapakeji, asi kana rako vhoriyamu rakadzikira zvakanyanya, iwe unofanirwa kufunga kuti mutengo wacho wakakodzera here, tisingataure kuti kuomarara kweiyo yepamusoro ad server ingangove ichakunda yako zvinodiwa.
Iwe unoda chishandiso chakareruka chine mashoma chete akakosha maficha
Kana usati wamboshandisa ad server, huwandu hwakawanda hwezvinhu uye sarudzo zvinogona kutyisa. Yemazuva ano kushambadzira mapuratifomu anowanzo kupa zvinopfuura mazana mashanu maficha ekunangisa, analytics, optimization, kutendeuka kuteedzera, uye zvakazara zvinoshanda kwazvo manejimendi. Kunyange zvichinzwika senge yekuwedzera kune vazhinji, vamwe vashandisi vanoona izvi maficha senge chinokonzeresa nekuda kwenguva inotora kugona uye kutanga kuzvishandisa. Kana yako yekutengesa vhoriyamu isingade mhinduro yepamusoro, ungangoda kufunga chishandiso chakareruka.
Nekudaro, kana pasina chimwe chezvimwe zviratidzo pane ino runyorwa chinoshanda kwauri uye iwe uchifunga kuti wagadzirira mhinduro inogadziriswa uye inodhura senge ad server, haufanire kurega kuomarara kuchikutyisidzira kure. Nyanzvi dzine ruzivo dzinogona kukurumidza kudzidza mashandiro uye kubatsirwa kubva kumushandirapamwe wekugadzirisa maficha.
Iwe unoda kutenga traffic nenzira
Seva yekushambadzira chishandiso chakaringana kutenga zvakananga midhiya, asi haisi mhinduro yehurongwa. Kana iwe uchida kutenga zvakarongeka, yekuda-parutivi chikuva mhinduro iri nani pane zvako zvaunoda. Iwe unogona kuwana chena-chitaridzi DSP uye uzviite zvizere kune izvo zvinodiwa zvebhizinesi rako. Ndiine RTB bhidha pamucheto wayo, chinodikanwa-padivi chikuva chinoita kuti iwe ugone kutenga zvinowoneka otomatiki uye mune chaiyo-nguva.
Iwe haudi kuwana yakawanda
Iyi kesi isingawanzoitika, asi zvinokwanisika kuti mamwe mabhizinesi haagadzirire kukwidza mari yavo. Kusimudzira yako software mhinduro kungangoda kuwanda kubhodhi uye kudzidziswa kwausina kugadzirira kuita. Kana iwe uchinge wakasununguka nemari yako yaunowana uye nedanho rekugadzirisa mune ako eparizvino kushambadzira mashandiro, unogona kusarudza kusaisa mari mukukura panguva ino. Pasina chinokurudzira kukura kana kugona, hapana chikonzero chekutenga ad server.
Pane chimwe cheizvi chinoshanda kwauri here?
Kana chimwe kana zvimwe zvezviratidzo izvi zvikarova kumba kwauri, ingangove isiri iyo nguva yakakodzera kuti iwe uise mari mune yekushambadzira server. Zvisinei, kana pasina chimwe chezviratidzo izvi chinoshanda kwauri, inogona kunge iri nguva yekutarisisa zvakadzama mubatsiro remaseva eshambadziro. Ad ad server ndeye alpha uye omega yekushambadzira, uye inogona kurova chero yeimwe shambadziro inoshumira mapuratifomu maererano neyakagadziriswa, mutengo-unoshanda, uye manejimendi anoenderana nezvinodiwa chaizvo zvebhizimusi rako.
Tora Yemahara Muedzo weEpom Ad Server
Tags: ad serverkushambadzakushambadzira serverdspepomMatsimbachaiyo-nguva kubhidhartbshambadza shambadzo
Lina ndiye Musoro Wekutengesa kuEPOM. Iye zvakare ane ruzivo rwakakomba mukutungamira kwekutaurirana pamapuratifomu mazhinji, kubva kune vechivanhu vezvenhau kusvika kune vanokurudzira. Pa EPOM, iye anogadzira ruzivo rwevatengi uye anotyaira vatengi kudakara kwechiratidzo kuburikidza neese madhijitari ekushambadzira chiteshi zuva rega rega.